Machadka McKnight wuxuu raadiyaa Xisaabiye khibrad leh. Musharaxa guuleysta wuxuu ilaalin doonaa diiwaanka maaliyadeed ee aasaasiga ah qaab waafaqsan mabaadi'da guud ee la aqbalay ee xisaabinta (GAAP) iyo hababka ugu fiican. Mawqifkani wuxuu mas'uul ka yahay xisaabaadka la bixin karo iyo diiwaangelinta canshuuraha ee la xidhiidha, maareynta qandaraaska, xisaabinta guud, taageeridda warbixinta maaliyadeed, iyo taageeridda xisaab-celinta sannadlaha ah, miisaaniyadda, iyo diiwaangelinta canshuuraha. Jagadani waxay u adeegtaa keyd ahaan sidii loogu baahdo Xisaabiyaha Yaryar.
Jagadani waa door shaqsi tabarucaad ah waxayna u warbixin doontaa Maareeyaha Maaliyadda.
Maareynta Lacag Bixinta
Habsocodsiinta iyo xaqiijinta tilmaamaha soo socda ee bangiyada, abuur iyo wax ka beddel macluumaadka iibiyeyaasha, iyo faylka.
Qaansheegyada nidaamka ee xisaabaadka la bixin karo, oo ay ku jiraan xaqiijinta saxnaanta, siyeynta, oggolaanshaha, iyo xareynta. Hubi bixinta waqtiga qaansheegta.
Abuur oo soo dir ogeysiisyada gudbinta lacag-bixinta ee bixinta lacagaha maamulka.
La soco fashilka lacag bixinta iyo Ogeysiiska Isbedelka ee laga helay bangiga, fiilooyinka dhicisoobay, iyo soo celinta jeegga jireed — u sheeg xubnaha shaqaalaha sida loogu baahan yahay si dhakhso ahna u xalli.
Heshiisiinta xisaabaadka GL ee laxiriira xisaabaadka la bixin karo. Iswaafajinta bayaanada ay heleen iibiyeyaasha iyadoo lala kaashanayo xubnaha shaqaalaha, lagana jawaabayo codsiyada macluumaadka, iyo baaritaanka iyo xalinta arrimaha.
Isuduwidda nidaamka goynta dhamaadka sanadka iyo isgaarsiinta.
Aqoonsiga fursadaha lagu hagaajinayo xisaabaadka la bixin karo oo lala shaqeyn karo IT, kooxda maaliyadda, iyo kuwa kale si loo hirgeliyo. Bixi falanqeyn iyo cabirrada kharashyada iyo xisaabaadka la bixin karo, sida la codsaday.
Xaqiiji qandaraasyada maamulka ee dhammaystiran, u qoondeeyo lambarka qandaraaska, iyo faylka.
Hayso macluumaadka ugu dambeeya ee qandaraasyada iibiyaha, oo ay ku jiraan khidmadaha / kharashyada la bixiyay ee nolosha illaa taariikhda qandaraas kasta. Dabagalka xubnaha shaqaalaha hadba sida loogu baahdo.
Su'aalaha xubnaha ka tirsan goobta isla markaana siiya tababarro shaqaale oo ku saabsan habka maaraynta qandaraaska.
Waajibaadka Hubinta & Canshuuraha La Xiriira
Ka ururi, dib u eeg oo ka xaree foomamka canshuuraha lagama maarmaanka ah iibiyeyaasha, tusaale ahaan, W8, W9, iwm Sii taageero sida loogu baahan yahay xubnaha shaqaalaha iyo dhinacyada dibadda.
Diyaarinta, dib u eegista, iyo isku dubaridka diiwaangelinta foomamka canshuurta sanadlaha ah ee iibiyaha la xiriira (1099/1096 iyo 1042 / 1042S).
Diyaari waraaqaha shaqada hanti dhowrka, qoraallada hoose, iyo diyaarinta taageerada bayaanka / falanqaynta kharashka shaqeynaya.
Deeqaha dib-u-heshiisiinta ee barnaamijka xisaabinta (GL) ee Blackbaud iyo Daqiiqadaha Guddiga / Guddiga.
Ku samee xisaabinta deeqda shuruudaha iyadoo lala kaashanayo xubnaha shaqaalaha aan dhaqaalaha ahayn.
Joogtee xiriirka aad la leedahay shaqaalaha Deeqaha & Maareynta Macluumaadka.
Hawlaha Guud ee Xisaabaadka, Warbixinta, iyo Mashaariicda Gaarka ah
Diyaarinta iyo qeybinta maareynta miisaaniyada billaha ah iyo warbixinada faa iidada yar. Su'aalaha xubnaha goobta ka diyaarso qorista joornaalada dib u kala soocida sida ugu habboon. Abuur warbixinno dhaqaale oo ad-hoc ah sida loogu baahdo.
Samee xisaabinta hantida horudhaca ah iyo xisaabaadka faa'iidooyinka isla markaana la heshii xisaabaadka bangiga.
Ka caawi mashaariicda gaarka ah ee muddada-dhow iyo muddada-dheer ee soo kaca inta lagu jiro ganacsiga.
Hubi in kooxda maaliyaddu u hoggaansamaan siyaasadda haynta dukumintiga ee aasaaska.
U adeegso xiriiriyaha koowaad ee IT / kuwa kale si aad u xalliso cilladaha is-dhexgalka software-ka xisaabinta.
U adeegso keyd ahaan Xisaabiyaha Yaryar. U adeegso keyd ahaan Xisaabiyaha Sare ee howlaha xulashada.
Xisaabinta Hantida iyo Ijaarka
Diiwaangeli waxqabadka hantida go'an, samee dib u heshiisiin, diyaarsana saadaasha qiimo dhaca.
Lasoco oo diiwaangeli heshiisyada isla markaana hubi in si habboon loogu diiwaangeliyey buugga guud.
Ku samee saddax saddex sano jir ah hanti-go'an IT-ga iyo Xarumaha.
Kooxda iyo tabarucaadka aasaasiga ah
Ku darso horumarinta iyo fulinta qorshaha shaqo ee kooxda xisaabinta sanadlaha ah.
Abuur oo ilaali tilmaamaha iyo macluumaadka cad ee waajibaadka shaqo ee aasaasiga ah iyo, sida ay khuseyso, tilmaamaha guud ee ururada, fuulista, iyo tababarka.
La soco cusbooneysiinta tilmaamaha iyo xeerarka saameynaya waajibaadka shaqo ee aasaasiga ah. Isuduwidda hirgelinta heerarka cusub.
Ka qaybgal oo si firfircoon uga qaybgal shirarka shaqaalaha, dib u gurashada, fadhiyada DEI, iyo shirarka kale ee aasaasiga ah.
Kaqeybqaado kooxaha shaqada iskutallaabta ah, sida ugu habboon.
La xiriir kooxda barnaamijka la aqoonsaday kana qaybgal booqashooyinka goobta ee sanadlaha ah.
Awoodaha Gaarka ah ee Jagada
Ficil-ku-saleysan, Qorsheyaasha iyo Iswaafajinta, Diirada Macaamiisha, Waxay hagaysaa habraaca shaqada
Shaqada sida caadiga ah waxaa lagu qabtaa jawiga shaqada ee xafiiska laakiin waxaa ku jira foorarsiga, foorarsiga, iyo jilbaha loo xareeyo.
Xilliyada qaarkood fiidkii iyo sabtiyada iyo axadaha ayaa loo baahan yahay.
Safarka ugu yar ee ganacsiga ayaa la saadaalinayaa.
Shahaadada Bachelor-ka, oo la doorbiday, xisaabinta ama dhaqaalaha iyo ugu yaraan seddex sano oo la xiriirta khibrad shaqo oo waqti-buuxa ah oo aasaasi ah, aan macaash doon ahayn, ama hay'ad dawladeed oo leh laba ama in ka badan oo khibrad ah maaraynta xisaabaadka la bixin karo; bedelkii shahaado, waxaan aqbali doonnaa musharraxiinta leh isku-dar khibrad iyo tababar u dhigma qancinta shuruudaha kor ku xusan.
Aqoonta aan macaash doonka ahayn ama aasaaska xisaabinta iyadoo la fahmayo GAAP.
Xirfad u leh abaabulka howlaha, maareynta waqtiga, iyo kala hormarinta mashaariicda.
Awood u leh inuu maareeyo culeyska culus ee shaqo aad u faahfaahsan oo leh xawaare iyo saxnaan.
Awood u lahaanshaha u hoggaansanaanta heerarka sare ee saxsanaanta iyo muujinta feejignaan xoog leh oo faahfaahsan.
Awood la caddeeyey oo lagula xiriiro si xirfadaysan iyo waxtar leh isla markaana u wada shaqeeya iskaashi, iyadoo macaamiisha diiradda la saarayo, gudaha iyo dibaddaba.
Xirfad u leh aqoonsiga karti darida iyo aqoonsiga iyo hagaajinta hanaanka wadista.
Awood u lahaanshaha la shaqeynta heerka sare ee aqoonta Microsoft Office-Word, Outlook, PowerPoint, iyo OneNote.
Khibrad u leh Microsoft Excel, oo ay kujirto aqoon iyadoo la adeegsanayo qaacidooyin horumarsan, miisas iyo qaabeyn, jaantus hore, miis miisaaneed iyo warbixino udir, iyo VBA iyo macros.
Aqoonta Sage Intacct ama barnaamij xisaabeed la barbardhigi karo.
Awood u leh inuu si fiican u shaqeeyo si madax-bannaan iyo jawi kooxeed.
Machadka McKnight Foundation wuxuu bixiyaa xirmo magdhow tartan ah. Faa'iidooyinka waxaa ka mid ah caafimaadka, ilkaha, nolosha, iyo caymiska naafada; fasax lacag la'aan ah; ku biirinta qorshaha hawlgabka; u dhigma barnaamijka hadiyadaha sadaqada; iyo jawi shaqo oo dabacsan. Fursadani waa shaqo waqti-buuxa ah, oo ka-dhaafitaan kuna saleysan Minneapolis. Mushaharka waa $66,000-1-122700.
Riix halkan si aad u dalbato.
Mawqifkani wuxuu xirmi doonaa Talaadada, Abriil 27 markay tahay 5 galabnimo waqtiga maalinta.
Xidhan: Abriil 27, 2021